ओमका कर्मचारीलाई सम्मानजनक समायोजन गर्छौंः एनएमबि बैंकका सीइओ केसीको अन्तर्वार्ता – Clickmandu
क्लिकमान्डु २०७६ असार ३ गते १४:४४ मा प्रकाशित
एघार वर्षअघि फाइनान्स कम्पनीबाट वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति भएको एनएमबि बैंक देशकै ठूला १० बैंकमा पर्न सफल भएको छ । बैंकले एकनासको वृद्धि गर्दै आफूलाई बलियो बनाउँदै लगेको छ । विदेशी संस्थाबाट ऋण ल्याउने एकमात्र बैंक पनि हो एनएमबि । यसअघि ४/५ वटा विकास बैंकलाई मर्ज गरेर सहज व्यवस्थापन गर्न सफल यो बैंकले ओम डेभलपमेन्ट बैंकलाई गाभ्दैछ । पछिल्लोसमय बैंकिङ व्यवसायमा देखिएको उत्तारचढाब, तलरता संकट, मर्जरको व्यवस्थापन लगायतक विषयमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुनिल केसीसँग क्लिकमाण्डूका लागि कमलकुमार बस्नेत र नारायण पौडेलले गरेको कुराकानीः
जेठ २ गते ओम डेभलपमेन्ट बैंकसँग मर्जरको सम्झौता भयो । कहिलेदेखि एकीकृत कारोबार शुरु हुन्छ ?
हाीले मर्जरमा जाने समझदारी गरेपछि स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकमा पठाएका छौं । राष्ट्र बैंकले एलओआई दिइसकेपछि सबै काम टुंग्याएर २ महिनाभित्र एकीकृत कारोबार शुरु गर्छौं ।
टुंग्याउन बाँकी के-के काम छन् त ?
करीब सबै कुरा टुंगिसकेको छ । यद्यपि अझैपनि केही विषय टुंगोमा पुगिसकेका छैनन् । प्रक्रियामै रहेकाले यहाँ डिस्क्लोज गर्न मिल्दैन ।
कर्मचारीको समायोजन कसरी गर्ने ?
हामीले पहिले पनि यस्तै खालको मर्जर गरेका हौं । सबै कर्मचारीलाई सम्मानजनक हिसाबले समायोजन छौं ।
यो त कुटनीतिक जवाफ भयो, ठ्याक्कै भनिदिनुस् त कर्मचारी समायोजन कसरी हुन्छ ?
विस्तृतरुपमा कुरा गर्न त अझै बाँकी छ । उहाँहरु पनि राम्रो काम गरिरहेको बैंक हो । त्यसैले कर्मचारी समायोजनका लागि त्यतिधेरै समस्या नआउला ।
एनएमबीको उच्च व्यवस्थापनमा ओमले स्थान पाउला कि नपाउला ?
केही स्थानमा त उहाँहरुको प्रतिनिधित्व हुन्छ नै । कुनमा कसरी भन्ने अहिलेसम्म फाइनल भइसकेको छैन् । अहिले एलओआई नै नआइसकेकाले हामीले निर्णय गरेका छैनौं । त्यसबारेमा अझै छलफल गर्न भइरहेको छ । एनएमबिसँग पहिले पनि अनुभव भएकाले समायोजनमा कुनै समस्या आउँदैन् । हाम्रो आफ्नै खालको कर्मचारी बिनियमावली छ । एनएमबि बैंककै कर्मचारी बिनियमावलीमा जाने भन्ने पक्का कुरा हो । हामी सकेसम्म सबैलाई मिलाएर जाने भन्नेमा छौं ।
मर्जरका लागि ओम नै किन रोज्यो एनएमबिले ?
ओमसँग अहिले मात्रै होइन, पहिलेदेखि नै कुरा भएको हो । पहिले पनि एक लेभलसम्म कुरा भएको थियो । ४ नम्बर प्रदेशमा हाम्रो उपस्थिति तुलनात्मकरुपमा कमजोर रहेकाले हामी पनि यस्तै संस्था खोजिरहेका थियौं । ओमसँग कुरा मिल्यो अनि मर्जरको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो । प्रदेश ४ मा धेरै अवसरहरु पनि छ । र, ओम जस्तो राम्रै खालको काम गरिरहेको बैंक हुँदा सजिलो हुने भएकाले योजनाबद्ध ढंगले नै मर्जर गरेका हौं । यो दुबैको आवश्यकता हो, एक पक्षको आवश्यकता मात्रै होइन । यसले दुबै पक्षलाई फाइदा नै गर्छ ।
तलरता नहुने चूनौती मात्रै नहोला अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । बैंकले पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु पर्नेछ ।
सेयर आदान प्रदान अनुपात (स्वाप रेसियो) चैं कति हो ?
अहिले ड्यु डेलिजेन्स अडिट (डिडिए) रिपोर्ट आइसकेको छैन् । पहिले डिडिए आइसकेपछि मात्रै कति स्वाप रेसियो हुने भन्ने हुन्छ । उहाँहरुले पनि राम्रै गरिरहनु भएको छ । आश्चर्यजनकरुपमा त नहोला । अब त्यो रिपोर्ट आइसकेपछि नै जानकारी होला । अहिले त्यस्तै सहमति भएको छैन ।
एनएमबिले यसअघि पनि मर्जर गरिरहेको छ । तर अहिलेसम्म केही समस्या देखिएको छैन । यति राम्रो व्यवस्थापन कसरी भयो ?
यो राम्रो व्यवस्थापन कै कारणले गर्दा भयो । सबैलाई ग्रो गर्दै तालिमहरु दिँदै सबैको वृद्धि विकास गर्दै अगाडि बढेकाले मात्रै यो सम्भव भएको हो ।
११ वर्ष अगाडि तपाईले एनएमबिमा काम सुरु गर्दा र आजको अवस्थामा कत्तिको भिन्नता पाउनु भएको छ ?
तत्कालिन समयमा हामी सानो बैंकका रुपमा २५औं नम्बरमा आएर शुरु गरेका हौं । हामी योजनाबद्ध ढंगले नै आएका हौं । शुरुमा होलसेल बैंकका रुपमा आएका थियौं । एउटा लेभलमा थोरै शाखाहरुबाट सुरु गरेका हौं । पछि शाखाको नेटवर्क विस्तार गर्ने क्रममा प्रदेश नम्बर १ र ५ मा विस्तारलाई बढावा दियौं । निरन्तर रुपमा सस्टेनेइबल ग्रोथका रुपमा जानु पर्छ भन्ने आधारमा हामी अगाडि बढ्यौं । र, आजका दिनसम्म आइपुगेका छौं । १०/११ वर्षमा हामी अगाडि बढेका छौं । धेरै एग्रेसिभ पनि छैनौं । हामी दीर्घकालिन रुपमा वृद्धि हुने गरी अगाडि बढिरहेका छौं ।
अहिलेसम्म विदेशी संस्थाबाट ३५० करोड जति ऋण लिएका छौं । अर्को फेरि पटक पनि ऋण लिने तयारी गरिरहेका छौं । विदेशबाट पैसा ल्याउँदा तरलताका लागि फाइदा गर्छ । र, अर्को कुरा विदेशी कम्पनीहरुले पनि नेपालमा लगानी गर्नु भनेको पनि राम्रो संकेत हो ।
विकास बैंकसँग मात्रै मर्जर गर्ने कि वाणिज्य बैंकसँग पनि गर्ने हो ?
मर्जर जोसँग पनि गर्न सकिन्छ । हाम्रा लागि प्रदेश नम्बर ७ मा धेरै अवसर छन् । सोही हिसाबले पनि जान सकिन्छ । तर त्यसका लागि हाम्रा केही मापदण्डहरु छन् त्यो पूरा भएपछि मात्रै मर्जरमा जाने हो । बैंकलाई अगाडि बढाउने निर्देशन भइसकेपछि हामी विस्तारमा लागि रहेका छौं ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुको संख्या धेरै भयो । त्यसैले वाणिज्य बैंकबीचको मर्जरलाई अघि बढाउन खोजिरहेको छ । तपाईंहरुले कस्तो तयारी गरिरहनु भएको छ ?
केन्द्रिय बैंकले त्यसप्रकारको नीति ल्यायो भने त पक्कै पनि जानुपर्छ । त्यसमा कुनै समसस्या भएन । अब जहाँसम्म संख्याको कुरा हो जहाँसम्म बलियो हुनु राम्रो हो । तर कति संख्या भए ठिक हो त भन्ने आधार चाहिन्छ । संख्याभन्दा पनि गुणस्तर ठूलो कुरा हो । अझै पनि गाउँ–गाउँ गएर शाखा विस्तार गर्दा पनि अझै पनि पहुँच सबै ठाउँमा पुग्न सकेको छैन । सबै बैंकले लाइसेन्स पाएरै भएका हुन । २८ वटा बैंक भएर पनि गर्ने वा १४ वटा भएर गर्ने भन्ने हो । हाम्रो अर्थतन्त्रको विकासका लागि बैंकिङ क्षेत्रले गर्नुपर्छ भन्ने हो ।
नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रको विकास समानरुपले भएन, बैंकहरु मोटाए तर अर्थतन्त्र राम्रो भएन भन्ने बहस पनि चलिरहेको छ । तपाईंलाई कस्तो लाग्छ ?
त्यसलाई सकारात्मक रुपमा हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । त्यो अवस्थामा पनि बैंक चलेकै हुन । अर्थतन्त्रलाई आजको समयसम्म ल्याउनका लागि बैंकले पनि सहयोग गरिरहेका छन् । त्यसबाहेक सामाजिकरुपमा पनि भूमिका खेलेको छ । बैंक मात्रै माथि जाने अरु नजाने भन्ने हुँदैन । आजको दिनमा अरु सबै क्षेत्र खत्तम नै भएको भए बैंक अगाडि बढ्न सक्ने थिएनन् ।
बैंकर्स संघले भद्र सहमति भन्दै निक्षेपको बयाजदरमा कार्टेलिङ गर्यो तर कर्जाको ब्याजदरमा त त्यस्तो कुनै सहमति गरेको छैन नि ?
डिपोजिटको कुरामा हामीले सहमति नगरी जाँदा बजारमा समस्या आउँथ्यो । त्यसमा पनि धेरै तर्कहरु भए । आजका दिनमा सिस्टममा राख्नका लागि राम्रो काम भएको हो ।
बैंकहरुको ब्याजदर चर्को भयो । यसले ऋणीहरु मारमा परे भन्दै उद्योगी व्यवसायीहरु सडक आन्दोलन मै उत्रिन बाध्य भए । यद्यपि अहिलेसम्म बैंकले ब्याजदर घटाएका छैनन् नि किन ?
आजको दिनमा बैकिङ क्षेत्रले हाइड्रोपावरमा लगानी नगरेको भए आज लोडसेडिङ हट्ने पनि थिएन । ब्याजदर सानो कुरा हो । बैंकले धेरै ठाउँमा लगानी गरेको छ । धेरै ठाउँमा रिक्स लिएर नै गएको छ । आजभन्दा ३० वर्षभन्दा पहिले र आजको अवस्था धेरै फरक छ । बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठाउँमा परिवर्तन ल्याएको छ । आजका दिनमा ब्याजदरका हिसाबले सामान्य विरोध आउनु स्वभाविक नै हो । त्यसैले बैंकले गरेन भन्नु भन्दा पनि धेरै कुराहरु योगदान गरेको छ । त्यसैले सबैतर्फबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ ।
यो वर्ष एनएमबिको लक्ष्य अनुसारको ग्रोथ भयो कि भएन ?
हामीले लक्ष्य अनुसारको वृद्धि गर्छौ । गत वर्षको मोनिटरी पोलिसीले २० प्रतिशतको वृद्धिको कुरा गरेको थियो र हामी सोही अनुसारले वृद्धि गरिरहेका छौं । यसका लागि हामीले बाहिरबाट पनि पैसा ल्यायौं । हामी एउटा मात्रै क्षेत्रमा केन्द्रित भएनौं । त्यसैले पनि वृद्धि भएको हो ।
यो वर्ष असार लाग्दासम्म पनि लगानी योग्य पुँजी (तरलता)को अभाव छ । आगामी वर्षमा कस्ता चूनौति देख्नुहुन्छ ?
चूनौतिहरुसँग अवसरहरु पनि छन् । तलरता नहुने चूनौती मात्रै नहोला अवसरका रुपमा पनि लिन सकिन्छ । बैंकले पनि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्नु पर्नेछ । अहिलेको ग्रोथ कम भएर ट्रेड डेफिसिट र रेमिट्यान्स अहिलेको अनुसारले अगाडि गइरहने हो भने ३/४ वर्षपछि करेन्ट अकाउन्टको डेफिसिटमा पनि ५ प्रतिशतको हारहारीमा आइपुग्छ होला । यसमा समस्या हुँदैन् ।
डिपिआरअनुसार रेलमार्ग बनाउन १० खर्ब चाहिन्छ- भौतिक पूर्वाधारमन्त्री वसन्त नेम्वाङ
मुनाफाको नाममा लुट मच्चाउन दिने पक्षमा छैनौंः नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल
सरकारले मापदण्ड परिवर्तन नगरे देशभरका सबै क्रसर व्यवसाय बन्द हुन्छन्ः श्यामराज खड्का
आर्थिक गतिविधि खुला गर्दै कोरोना विरुद्ध लड्नुपर्छः सीएनआई वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल
नेपाल मामिलामा भारत चुकेकै हो- पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री डा. भेषबहादुर थापाको अन्तर्वार्ता